Cryptocurrency အလုပ်အကိုင်စာရင်းအပြည့်အစုံ: EOS, Ripple, Litecoin နှင့်အခြားအရာများ!
Cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များ စျေးကွက်အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစူပါအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနေသည်။ Dubai City သည်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး blockchain-powered Government ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့သည် ၂၀၂၀ ပြပွဲမတိုင်မီပထမ ဦး ဆုံး blockchain-powered အစိုးရဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းပါသလား။ Cryptocurrency အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအရူးကဲ့သို့ကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ အိုင်တီမဟုတ်သောအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များစွာရှိသည်။ Bitcoin သို့မဟုတ် Ethereum သို့မဟုတ် Ripple ငွေပေးချေမှုစနစ်စသည့်ကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေနေသောလူများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Bitcoin.com ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်၏နောက်ကွယ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
သင်တို့ရှိသမျှသည် crypto အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-related အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများထင်တဲ့အခါ။ သငျသညျကျိန်းသေ Bitcoin.com အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်ထင်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ crypto ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်အတွက်အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, စျေးကွက်အစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်, သင်ရနိုင် ဝေးလံခေါင်သီ cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များ နောက်တစ်နှစ်အတွက်အများကြီးပိုမြန်။ Cryptocurrency သတင်းစျေးကွက်ကျိန်းသေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းပို့သည်။ အထူးသဖြင့်မျိုးစုံ channel များကိုဖြတ်ပြီးအမြန်နှုန်းကိုချိုးဖောက်မှာ။ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် အဆိုပါ cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်။ အခုတော့တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါသည် အောင်မြင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူဖြစ်လာဖို့အချိန်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ cryptocurrency ကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်တော်ပင်သံသယထက်အများကြီးပိုမြန်ကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ နယူးကုမ္ပဏီများမှ cryptocurrency အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဈေးကွက်ထဲမှာမကြာသေးမီလများအတွင်းမတူနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု generate ။ ထိုအစဉ်အများအပြားအသစ်သောနည်းပညာများကိုနေဆဲကြီးထွားလာ။ အဆိုပါ cryptocurrency စျေးကွက်အကြီးဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာ၏တဦးတည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Cryptocurrency အလုပ်အကိုင် Non-ကော်ပိုရိတ် startup အခွင့်အလမ်းများအကြားကြီးထွားလာနေပါတယ်။ Angel.co တစ်ခုအံ့သြဖွယ်စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ် အဆိုပါ cryptocurrency စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အစီရင်ခံစာ.
မသာဖြစ်ကြ ရရှိနိုင်ပါကပိုအလုပ်အကိုင်များဒါပေမယ့် blockchain အတူလုပ်ကိုင်ရာထူးလည်းပိုကောင်းပေးဆောင်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဝန်ထမ်းများကိုတွင် Non-crypto အလုပ်အကိုင်များထက်ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားနှုန်း 10-20 ၏လစာကိုကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ Cryptocurrency မြန်ကြီးထွားလာနေသည်
ပိုက်ဆံ cryptocurrency ကုမ္ပဏီများနှင့်အသစ်သောစတင်သို့ pomping ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ AngelList ကုမ္ပဏီဒေတာ မှစ. ကုမ္ပဏီ 2018 ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းကြည့်ရှုကြ၏။ ထိုအခါ cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင်းထွက်ရှာတွေ့ ကြီးထွားလာတာကိုပိုမြန်အခြားစျေးကွက်ထက်။ ထို့အပွငျပေါင်းစပ် 2019 နှင့် 2010 အပေါငျးတို့သထက် 2016 အတွက် cryptocurrency ကုမ္ပဏီတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံပိုပြီးပိုက်ဆံလည်းမရှိ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကိုလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များဘုတ်အဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေး၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော ဒူဘိုင်းအတွက် crypto ကမ္ဘာကြီး။ ဤစကားမှန် Keynote ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆုံးနဲ့သီးသန့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ ကိုသာအများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာအတွက်နေရာချစကာ, ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဇိမ်ခံနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေထုမှာ Jumeirah Mina A'Salam.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, cryptocurrency ကုမ္ပဏီများသည်ကြီးထွားလာပေမယ့်ဒူဘိုင်း၌မသာနေကြသည်။ နယူးကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပိုက်ဆံပိုကြီးတဲ့ပမာဏပြုစုပျိုးထောင် ဥရောပ အများကြီးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးမှာအမေရိကန်။ ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာအသစ် ထိပ်တန်းအခွက်တဆယ်ကိုရှာတွေ့ဘို့မိမိတို့ငှားရမ်းလိုအပ်ချက်ရှိခြင်းကုမ္ပဏီများမှ.
အလုပ်အကိုင်အစာရင်းများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကလူမှုရေးဆိုဒ်များတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ အဆိုပါ cryptocurrency ငှားရမ်းကုမ္ပဏီများမှ နီးပါးပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွင်းရာထူး၏နံပါတ်နှစ်ဆပါပြီ။ Cryptocurrency ဂျော့ဘ်ယူအေအီးတစ်ရှုးနဲ့တူကြီးထွားလာကြသည်.
ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ cryptocurrency အတွက်အလုပ်?
အလုပ်ရှာဖွေသူများရုံဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြီးထွားလာစူပါအစာရှောင်ခြင်း၏ cryptocurrency ဈေးကွက်ပျော်မွေ့။ အဆိုပါ cryptocurrency အစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနှင့်၎င်း၏အလုပျသမားမြားအတှကျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်အသစ်ကျွမ်းကျင်သူများ blockchain-based ကုမ္ပဏီများသည်အနာဂတ်တွင်အများကြီးပိုမြန်ကြီးထွားမည်ကိုမှတ်သားယူသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ, cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များ NYC စတင်ယင်း၏လုပ်သားများမှဝေးလံသောရာထူးကမ်းလှမ်းရန် 25% ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြလျှင် သင် blockchain အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ သငျသညျလညျးဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Non-နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ရည်ရွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တတ်နိုင် ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်နှင့်စစ်ဆင်ရေးအဖြစ်အများအပြားရာထူးအတွက်အလုပ်.
မြင့်မားသောနည်းပညာပညာရေးသေချာပေါက်မဖြစ် တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ Bitcoin အတူ။ ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ကနေအသစ်အစီရင်ခံစာများအလားအလာန်ထမ်းဖော်ပြသည်။ အသစ်လုပ်သားများကိုသာသဘောတရားများနှင့် crypto စျေးကွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဝေါဟာရများကိုနားလည်သင့်တယ်။ အဆိုပါ cryptocurrency ဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အအကြွေစေ့လဲလှယ်ကုမ္ပဏီများမှလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
cryptocurrency အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှကျူးလွန်ဖို့အတော်လေးဆန္ဒရှိမဟုတ်သောသူတို့၏ကျွမ်းကျင်သူများ။ အမြဲတမ်း CryptoCurrency စျေးကွက်များတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အဆိုပါအမြဲရှိတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ option ကိုအသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးအဘို့အထွက်လမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးထံမှအလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲရှာနေလျှင်။ သင်တစ်ဦးကျောက်မီးသွေးမိုင်း Bitcoin စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှလျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ blockchain developer သို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အနာဂတ် cryptocurrency နည်းပညာအစဉ်အမြဲရှိပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက် Block ကို Chain ကြီးထွားလာအလုပ်အကိုင်များ?
ယူအေအီးတစ်ဦးအပြည့်အဝလည်ပတ် blockchain-powered အစိုးရဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေ။ ဒါကအပါအဝင်အားလုံး၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျိန်းသေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ် ဗီဇာ applications များဒေသခံငွေပေးချေမှုနှင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးအတူငွေလွှဲ, ငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပင်လင်း။
အဆိုပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 2020 ကအပြည့်အဝလည်ပတ်မှုစနစ်အောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ် ယင်းမှာနည်းပညာအသစ်အစိုးရနှင့် nongovernment ကဏ္ဍများတွင် 50% ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကျော်တိုးမြှင့်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဒါကအခြေခံအလုပ်အပေါ်သုံးစွဲလျော့နည်းအချိန်နှင့်ယူအေအီးဘတ်ဂျက်အတွက်သုံးစွဲလျော့နည်းငွေနှင့်ကူညီသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါနည်းပညာအသစ်ဒူဘိုင်းအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းအဘူဒါဘီ၌မသာရာအရပျကိုယူပြီးစတင်ပါလိမ့်မည်နှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးဆီသို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။ အောက်ပါနှစ်များတွင် blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဤမျှလောက်များစွာသောဟောင်းစနစ်များကိုဖျောပွပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လိမ့်မည်သေချာဘို့အသိရကြရာတစ်ခုမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာနေရာတိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများပြောင်းလဲ ဒီလိုဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာအဖြစ်အနည်းငယ်နိုင်ငံများရှိ။ အဆိုပါစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကအမြဲသူတို့ရဲ့အဟောင်းစနစ်များခေတ်မီ။ ထိုအခါယူအေအီးအောက်ပါနှစ်အတွင်းအသွင်ပြောင်းဖို့ရှာဖွေနေသည်အဓိကဒေသများ၏အနည်းငယ်သေချာဘို့အိမ်ခြံမြေ, ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်များကိုပါလိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလူတွေမိတ်ဆက်လိမ့်မည် အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းအတွက် blockchain နည်းပညာ ယူအေအီးနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ၌တည်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, ငွေပေးချေမှုစနစ်ကလုံခြုံရေးနားလည်ကူညီပေးနေနှင့်နည်းပညာစားသုံးသူယုံကြည်မှုမြင့်တက်၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ် save လုပ်ပါ။
စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစိုးရအမှုဆောင်အရာရှိဟာ blockchain စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများပြီ။ သူတို့ဟာအမြဲအားလုံးအရောင်းအကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းသေချာနှင့်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့သင်တန်းအပြည့်အဝ trackable ပါစေ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျ cryptocurrency နှင့်အတူလုပျနိုငျအနည်းငယ်ကောင်းသောအရာလည်းရှိပါသေးတယ်။ သင်ပင် Bitcoin သို့မဟုတ်ဘို့တိုက်ခန်းများကိုဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချနိုင်ပါတယ် Bitcoin များအတွက်အားကစားကားများကိုဝယ်ကြလော့။ သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါသည်။
တစ်ဦးယူအေအီး blockchain များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား?
ယူအေအီးကုမ္ပဏီများမှပြီးသားအသစ်စတင်စီမံကိန်းများကိုတွေအများကြီးယူပြီးစတင်ပါပြီ ယင်း၏ blockchain နည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစွဲဖို့။ အနည်းငယ်ကြီးမားတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးထုတ်ပေးမှစတင်။ ဥပမာ, မာစီးဒီးလစာလက်ခံခဲ့သည် ဖောက်သည်များနှင့်အရောင်းမန်နေဂျာတို့အကြားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းအစိုးရ, start-ups နှင့်တစ်ဦးအလွန်မြင့်မားသောအဆင့်မှာအသစ်သောအခွင့်အလမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများ။ ဒူဘိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီး blockchain အစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အဖွင့်အစအဦးဖြစ်ကြ၏။
cryptocurrency နှင့် blockchain အတွက်သာအနုတ်လက္ခဏာဘက်ကလေးမွေးစားခြင်းအစောပိုင်းအဆင့်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကလိမ်လည်မှု clients များရန်ကြိုးစားသောအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများသည်။ သို့သော်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပျောက်ကွယ်ကြပါလိမ့်မယ်။
Cryptocurrency Market ကအတွက်ဂျော့ဘ်များအတွက် Apply မှထိပ်တန်း Website များ - ယနေ့ Apply!
ဤတွင် Apply: https://coinmarketcap.com/careers/
အဆိုပါ CoinMarketCap လူတွေ cryptocurrency စျေးနှုန်းများစစျဆေးနိုငျဘယ်မှာ No.1 ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအ crypto ကုန်သည်များအတွက်အချက်အလက်များ၏ကမ္ဘာ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တိကျမှန်ကန်ရင်းမြစ်။ အနည်းငယ်အလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်သင်သည်ရှိနိုင်ပါသည်ကမ်းလှမ်း ဥပမာ:
ဒါကကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတစ်ဦးချင်းစီ၏သန်းပေါင်းများစွာသောရှိခြင်း။
အသစ်က crypto ကမ္ဘာကြီးအဖွဲ့အစည်းများရှာဖွေလူများ, အကောင်းဆုံးကိုဖလှယ်မှုပလက်ဖောင်း။ အဆိုပါ CoinMarketCap ကျိန်းသေလိမ့်မည် ပိုပြီးအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဖွံ့ဖြိုး US မှာသာဒီကုမ္ပဏီကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများမှ Capital, စျေးနှုန်းနှင့် cryptocurrency သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပါဆုံးကို up-to-date ဖြစ်အောင်စျေးကွက်စျေးနှုန်းများနှင့်လတ်ဆတ်သောသတင်းအချက်အလက်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ဤတွင် Apply: https://jobs.bitcoin.com/
Bitcoin Company ကိုတိုကျို, စိန့်ကစ်အတွက်ရုံးများနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီသူတို့ဆွီဒင်နှင့်ဘူဒါပက်အတွက်အသစ်တခုရုံးရှိခြင်းနှင့်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာ မွမ်ဘိုင်း။ Bitcoin ကတိကဝတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိနေခြင်းမှတဆင့် Bitcoin ၏ငွေပေးချေမှုသတင်းပြန့်နှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သူတို့အသစ်များကိုန်ထမ်းများနှင့်စီးပွားရေးအတွင်း၌အနာဂတ်လူများအတွက်တစ်ဦးပြိုင်ဘက်ကင်းအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရှိသည်။
မှန်မှန်ကမ္ဘာတဝှမ်းဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းများပေးပို့ခြင်း Bitcoin ။ ဥပမာအားဖြင့်ဒူဘိုင်းနဲ့နယူးယောက်မြို့များတွင်နေရာသစ်တွေ့ကြုံခံစားရန်။ သူတို့ကိုတွေ့ပါစေ စက်မှုလုပ်ငန်းဘဏ္ဍာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်ကူညီပေးနေအသစ်များကိုန်ထမ်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုဆောင်အရာရှိအမြဲအသစ်အလုပျသမားမြားကိုနားထောငျနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများမျှော်လင့် Bitcoin ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပင်ကမ္ဘာတဝှမ်းအိမ်ရှင်ဖြစ်ရပ်များစပွန်ဆာ။ စဉ်တွင် Bitcoin.com အလုပ်လုပ်သငျသညျနိုင်ငံအသစ်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုလက်ခံရရှိရန်သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, သင်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ငွေသိမ်းကောင်တာတွေရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်တစ်ကြိမ်တစ်နှစ်ဝန်ထမ်းစိန့်ကစ်ငါတို့၏ကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကုမ္ပဏီပျံ။ အဲဒီမှာသူတို့ကလည်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်ဆည်း, နီးကပ်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြ ယူအေအီးကနေအမှုဆောင်အရာရှိ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း၌အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်သူတို့ကဖြန့်ချိမယ့်အစီအစဉ်ကိုဖြစ်ကြသည်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေအကြောင်းပြောဆိုရန်နှစ်သက်တော်မူ၏။ လူကြိုက်အများဆုံး Cryptocurrency ဂျော့ဘ်သည်ယနေ့လျှောက်ထား Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်သည်။
ဤတွင် Apply: https://consensys.net/careers/
အဆိုပါ Ethereum ဒုတိယအများဆုံးမှတ်မိ cryptocurrency ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Etherum အဖွဲ့သည် blockchain ရန် "စမတ်စာချုပ်များ" ၏အယူအဆဆောင်ခဲ့သောဤသူတော်လှန်ရေးသမားပလက်ဖောင်းစေ။ ဒါပေမယ့်လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူတို့တစ်ခုခုလျော့နည်းစွမ်းအင်ဆည်းပူးနေမှတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ရှာကြ၏။ ဤသည် cryptocurrency ပထမဦးဆုံးဇူလိုင်လ 2015 အတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်လာသည်။ ထိုအခါငယ်ရွယ်ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦး 21 နှစ်အရွယ် Vitalik Buterin ဒီ blockchain system ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် Ethereum cryptocurrency လျင်မြန်စွာ cryptocurrency အနုပညာရှင် status ကိုမှရှင်းလင်းခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုသက်သေခံကြပါပြီ။ အောက်တွင် သငျသညျကငျြ့သုံးနိုငျ website တစ်ခုရှိပါတယ် Etherum Cryptocurrency အတွက်အလုပ်အတွက်။
ဤတွင် Apply: https://ripple.com/company/careers/
ဒါကကုမ္ပဏီကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုအပေါ် 3rd နေရာရှိသည်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုတက်အဲဒီမှာအများအပြားရာထူးများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပြီးသားထိုကဲ့သို့သော Santander နှင့်ငွေဂရမ်အဖြစ်ကြီးမားကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဒါကကုမ္ပဏီအောက်တွင်ကြည့်ရှိသည်။ ဒီအခိုငျအမာကျိန်းသေများအတွက်အဆင့်အတန်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ဤတွင် Apply: https://careers.dubaifuture.gov.ae/
cryptocurrency နှင့် blockchain နည်းပညာများအတွက်အစိုးရ related စီမံကိန်းကို။ အဆိုပါလူသိများ ဒူဘိုင်းအနာဂတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အဆိုပါနည်းပညာအသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အနာဂတ်ပုံဖော်ဖို့ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူထူထောင်ခဲ့သည်။ မြေတပြင်လုံးအဖွဲ့အစည်းက အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်မဟာဗျူဟာကျကဏ္ဍများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်။ နှင့်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများနှင့်အတူသေချာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ Will သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အောင်မြင်မှုများ၌သင်တို့ကိုပင်မြင့်မားတဲ့အတွက်အကူအညီရ.
ဤတွင် Apply: https://www.blockgemini.com/careers.html
အလုပ်လုပ်မှနောက်ထပ်အာရပ်ကုမ္ပဏီ, သူတို့ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းကိုငှားရမ်းဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ2ဒူဘိုင်းအတွက်ရုံးများနှင့်အိန္ဒိယအတွက်တဦးတည်းရုံးရှိပါတယ်။ သေချာများအတွက်ဒူဘိုင်းမှလျှောက်ထားရန်ထိုက်တန်သို့သော်အိန္ဒိယအတွက်သိပ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လုပ်ခဖြစ်နိုင်သည်။
ဤတွင် Apply: www.adabsolutions.com
Adab ဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီကပထမဦးဆုံးအစ္စလာမ့် Crypto ချိန်း (FICE) အဖြစ် run သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပထမဦးဆုံးအမသာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရှီးcrypto လဲလှယ် -compliant ။ သူတို့ကအမှန်တကယ် Sharjah ဘဏ်များနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအစ္စလာမ့်ဥပဒေနှင့်အပြည့်အဝလိုက်နာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကမွတ်စလင်လူတစ်ဦးလျှင်ထိုအသေချာဘို့, သငျသညျသငျ့သညျ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအတွက်လျှောက်ထား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Adab တိုကင်ထုတ်ပေးစတင်ရန်ရှာဖွေနေဥပမာကြီးတွေအစီအစဉ်များရှိခြင်း။ ဒါကြောင့်မသာကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အလားအလာနှင့်အတူ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီမှအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်။ ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှဒူဘိုင်းယခုအစ္စလာမ့်ဘဏ္ဍာရေး၏ဒေသ၏တာတော့သေချာတယ်အချက်အချာကြောင်းကိုငါသိ၏။ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရရန်သူတို့ကိုသင်၏ CV နှင့်အတူအီးမေးလ်ပေးပို့ရပါမည်။
ဤတွင် Apply: https://www.coinbase.com/careers
အဆိုပါ Coinbase ကုမ္ပဏီကျိန်းသေဥပမာ Bitcoin နှင့် Monero များအတွက် cryptocurrency သို့ပိုက်ဆံပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီကုမ္ပဏီများအတွက်သာအနုတ်လက္ခဏာဘက်တည်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီကအမေရိကန်ဒါအတွက်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကယ်လီဖိုးနီးယားရှိဌာနချုပ်မှာရှိခြင်း, အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့အတော်လေးခက်ခဲကြောင့်ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်လည်းရှိ၏ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ။ သို့သော်နေဆဲ Coinbase မှ CV ကိုပေးပို့ခြင်းစမတ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့ဖြစ်သင့်သည်။
Coinbase ကုမ္ပဏီကိုလည်းအမြင့်ဆုံး rated ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Google ကအတွက် နှင့် Facebook ပေါ်မှာ။ သူတို့အံ့သြဖွယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကငှားရမ်းကြသည်ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။
ဤတွင် Apply: https://bitpay.com/about/team
Bitpay ကုမ္ပဏီအားဖြင့်သင်တို့ကိုငွေပေးချေ၏အနာဂတ်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ BTC မှအမေရိကန်ဒေါ်လာနေငွေလွှဲလုပ်ဖို့အလွန်ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင် panel ကိုအတူ website နှင့်စူပါလွယ်ကူပါတယ်ရှိခြင်းနေကြသည်။ အဆိုပါ BitPay ကုမ္ပဏီ cryptocurrency အပေါ်အခြေခံပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်နေသည်။
သူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန် client နှင့်အသုံးပြုသူများအတွက် Bitcoin ရဲ့ Open-source ကိုပလက်ဖောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကမ္ဘာကို Bitcoin ယူဆောင်လာခြင်းအဘို့ဖြစ်၏။ blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်လွယ်ကူဖြစ်ပျက်ကြောင်း Bitpay ဘဏ်ကဒ်နှင့်လုပ်နှင့်အတူလူကိုကူညီပေးခြင်း။
ဤတွင် Apply: https://angel.co/coinswitch-co/jobs
အဆိုပါအကြွေစေ့ switch ကိုကုမ္ပဏီအိန္ဒိယကနေအဓိကအားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတည်ထောင်ထားသည်။ သူတို့ကပဲကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနှင့် blockchain နည်းပညာအားဖြင့်ဗဟိုဦးအမြန်ဆုံးအလုပ်လုပ် cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းနှင့် 100% တည်ဆောက်ခြင်းမှအမေဇုံ, Microsoft, နှင့် Zynga ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အကြွေစေ့ Switch ဟာ crypto စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုသူတို့ရှိသမျှသည်ဦးဆောင်ဖလှယ်မှုကုမ္ပဏီများမှ aggregating ကြောင့်လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပေးသည်။
သူတို့ကအစအကြွေစေ့ switch သည်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ငွေပေးချေ၏ကောင်းတစ်ဦးစနစ်အရှိခြင်းနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများအားအမှန်တကယ်အချိန်မှာသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကမဆိုဘဲကြသည်မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစာမျက်နှာ သင်မူကား, Angel.co website တွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လဲလှယ်မှုအတွက် 250 cryptocurrencies နှင့် 45,000 အားလုံးထက်ပိုပြီးကျော်ဒါကကုမ္ပဏီထောက်ခံမှု။ ဒါကြောင့်အောက်ပါနှစ်ပေါင်းအသစ်ရာထူးတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မည်။
ဤတွင် Apply: https://www.careers.coinmama.com
Coinmama cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကအစ္စရေးလူသိများတဲ့ startup ကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ နှင့်ကျိန်းသေ, ကတည်းကသူတို့ 2013 ၌ဤ cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းတည်ထောင် Ra'anana တည်ရှိသည်။ အလွန် rated ကုမ္ပဏီဖြစ်လာ။ သငျသညျ blockchain အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် crypto-ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကို start တဲ့အခါမှာသင်ဤလုပ်ငန်းကိုဘယ်လောက်လူကြိုက်များသိကြပါလိမ့်မယ်။
182 နိုင်ငံများတွင်ကျော်အတွက်ဖောက်သည်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ Coinmama ။ နှင့်သင်တန်း၏, သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျမညျသညျ့အရပျမှသူတို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကမြန်ဆန်ထိရောက်ဆုံးနှင့်လုံခြုံလဲလှယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူလဲလှယ်န်ဆောင်မှုများပေး။
ဤတွင် Apply: https://www.cointiger.com/en-us/#/recruit
အကြွေစေ့ကျားကအစာရှောင်လမ်းအတွက်ကုန်သွယ် cryptocurrency များအတွက်အံ့သြဖွယ် cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ CoinTiger ကုမ္ပဏီထိပ်တန်းအဆင့် blockchain ဝန်ဆောင်မှုဖန်တီးသန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့အွန်လိုင်းချက်တင်ထောက်ခံမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပလက်ဖောင်းရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆုံးစွန်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေး blockchain နည်းပညာနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏။
အကြွေစေ့ကျားတစ်ဦးအလျှင်အမြန်ကြီးထွားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသင် blockchain စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြပြီးညာဘက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းလျှင် သင်တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုများရှိနိုင်ပါသည် သူတို့ထံမှသေချာဘို့ပါပဲ။
ဤတွင် Apply: https://www.luno.com/en/careers
Leno အခြားကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့နိုင်ငံတကာကလူတွေကိုအနည်းငယ်ရာပေါင်းများစွာကျော်ငှားရမ်းထားပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့က, Cape Town မှာရှိတဲ့နေရာလွတ်ရှိခြင်းလန်ဒန်နှင့်စင်္ကာပူနေကြပါတယ်။ အတိအကျ အလုပ်လာပြီ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများထဲမှဖြစ်လိမ့်မည်.
cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်သူတို့လူမျိုး, Bitcoin နှင့် Ethereum တူသော Cryptocurrencies နားလည် Monero နှင့်လျှင်မြန်စွာနိုင်ငံတကာတွင်ဘဏ္ဍာရေးရှုခင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ကူညီပေးနေနေကြသည်။
သငျသညျအလုပျအတှကျရှာနေနှင့် blockchain စျေးကွက်၏မတူကွဲပြားမှုများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုယုံကြည်သောနေတယ်ဆိုရင်။ သငျသညျအသစ်များကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ထူးချွန်များအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာပုံတော်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင် Apply: https://jobs.lever.co/bitpanda
Bitpanda လည်းထိပ်ဆုံး-rated cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းအကြားတွင်အဆင့်။ ဒီတော့ဝေးကုမ္ပဏီဥရောပသမဂ္ဂအတွက်သြစတြီးယားငှားရမ်းသည်။ အဘို့အဒါ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ဆိုတော့သင်ကဗီဇာလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည် ဒါမှမဟုတ်အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကိုရှောက်သွားနှင့်စပွန်ဆာဗီဇာရတဲ့။
Bitpanda ကျိန်းသေတဲ့ဥရောပရဲ့ဦးဆောင်လက်လီအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုအားလုံးတိုင်းကျော်ကနေပြည်သူ့ဝယ်ယူရောင်းချခြင်း Bitcoin, Ethereum, IOTA နှင့်ပိုပြီးနေကြသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီတစ်ခု, Fast လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ 24 /7ဖြစ်ပါသည် အလုပ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ.
ဤတွင် Apply: https://careers.plus500.com/
ကမ်ဘာပျေါမှာရှေးအကျဆုံး Crypto စက်များတစ်ခုမှာ။ ဣသရေလအမျိုးမှစီမံခန့်ခွဲမှုဒါကျိန်းသေကုမ္ပဏီသူတို့ကိုပေးရကျိုးနပ်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2013 အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပြီးသားလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်၎င်း၏အပိုင်းရှိခြင်းခဲ့သည်။ သငျသညျကျိန်းသေသူတို့ရဲ့အပေါ်တစ်ဦးကြည့်သင့်ပါတယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက် သူတို့ကို update ကြောင့်အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များအများကြီးမသာဗြိတိန်တွင်ကမ်းလှမ်း
ဤတွင် Apply: https://jobs.lever.co/kraken
ကရင် blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေသူကိုလူငယျအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အဖွဲ့ Kraken အတူပဲကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အပြုသဘောရှုထောင့်တစ်ခုမှာအဝေးမှငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကတိုကျို, ဒူဘိုင်းနှင့်လန်ဒန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဖောက်သည်များအစုတခုနှင့်အစုစု။ ကျိန်းသေသင်ဖေါ်ပြခြင်း သင်သည်တာရှည်အလုပ်အကိုင်အဘို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်.
နောက်ထပ်ကောင်းသောအချက် Kraken crypto စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ် extensionally ကြီးထွားလာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအများကြီးရှာကြသည် နည်းပါးလာနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှချက်တင်ပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအစဉ်အမြဲအာရုံပါစေ။
ဤတွင် Apply: https://shapeshift.io/careers
ShapeShift သာ cryptocurrency ပလက်ဖောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကဦးဆောင်သည် non-ချုပ်နှောင်ထားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ဒေတာများနှင့် tools တွေကိုသုံးပြီးအပေါငျးတို့သကမ္ဘာလုံးကျော်ပြည်သူ့။ 2014, ShapeShift အတွက် ဖြစ်လာနီးပါးအသစ်တစ်ခုခေတ်ရှေ့ဆောင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် cryptocurrency အချက်အလက်များ၏။ ShapeShift အိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမန်နေဂျာ, ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာများနှင့်နည်းပညာကို developer များအတွက်အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် Apply: https://jobs.cointelegraph.com/
သူတို့ကယခုအကြွေစေ့ကြေးနန်းနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အသစ်ကိုအပိုင်းရှိခြင်းနေကြသည်။ သငျသညျအများအပြားဒေသများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရဖို့ရှာကြသည်လျှင်, သင်ကသူတို့ရဲ့ website သို့အပိုင်းအပေါ်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီသာ crypto ကုန်သွယ်, p အကြောင်းကိုဆောင်းပါးများလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲမတိုင်မီroviding သတင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုနောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက် အဆိုပါ blockchain နည်းပညာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့။
ယခုသင်ကသူတို့မူထူးခြားတဲ့ပလက်ဖောင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ crypto ဈေးကွက်တွင်လည်း updated နှင့် crypto related အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ကိုရှာပါ။ သင်အမှန်တကယ်လုပ်နိုင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုများစာရင်းကိုနှင့်အတူ get အဆိုပါ blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း။ ထို့အပြင်အကောင်းဆုံး fintech နှင့် crypto စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည် သူတို့ရဲ့ website တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပို့စ်တင်.
ဤတွင် Apply: https://request.network
ဒါကကုမ္ပဏီဖွင့်အံ့သြဖွယ်, သူတို့သည်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုသို့စံဈေးကွက်ထဲကအလှည့်။ ထိုသို့တောင်းဆိုထားသောကွန်ယက်ကို e-commerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနာဂတ်နဲ့တူပုံရသည်။ ကုမ္ပဏီငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုမှုများအတှကျကျတ်ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အသစ်သောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်သုံးစွဲနိုင်ပါစေ။
ဤတွင် Apply: https://localbitcoins.com/careers
LocalBitcoins.com အဆင့်မြင့်နည်းပညာအိုင်တီအထူးကုဘို့ကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုသောကြောင့် လူသစ်ကုမ္ပဏီရူပါရုံကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာနှင့်အတူတွဲပြီးသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုဖလှယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒေသခံ cryptocurrencies စျေးကွက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနည်းပညာ Bitcoin ရန်။
န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိခြင်းကဒေသခံ Bitcoin ။ နေရာတိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာမစိုက် blockchain နည်းပညာ၏နောက်ကျောရယူရန်ကြိုးစား။ ဒါကကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု Bitcoin စီးပွားရေး၏အမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤကုမ္ပဏီ ယူ. ကျွန်တော်အခြားသူများအားနှိုင်းယှဉ်ပါလျှင်ကျွန်တော် LocalBitcoins.com 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ကွောငျးသိရကြလိမ့်မည်နှင့်ယနေ့ခေတ် 4000-5000 အသစ်များကိုမှတ်ပုံတင်နေ့ရက်တိုင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုအနာဂတ်တွင်ဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုအာမခံ.
ဤတွင် Apply: https://www.gemini.com
Gemini Crypto ချိန်းနယူးယောက်, အမေရိကန်အခြေစိုက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးလဲလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်တွေအများကြီး stockbrokers ပြီးသားအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေကြ.
သို့သော် Gemini သာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ cryptocurrencies ကုန်သွယ်မှု။ အမေရိကန်ဒေါ်လာကနေ Bitcoin နှင့် Ethereum ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဒီကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဘို့, သငျသညျယခုအချိန်တွင်စုဆောင်းရေးမန်နေဂျာမှာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ, ဒါရိုက်တာ, ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်စျေးကွက်တစ်ခုဗီဇာရှိရမည်။
ဤတွင် Apply: https://www.binance.com/Careers.html
ဤသည်ပေါ်တယ်လည်း အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ကသူတို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကမ်းလှမ်းထောက်ပံ့။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများအမြင့်မားဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအချို့ရှိသည်။ ရိုးရှင်းစွာအသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ် cryptocurrency အတော်ကြာအပေါ်တစ်ဦးကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်ကို re-ပုံဖော်နေကြသည်။ အကြောင်းမူကား, Biance ကြောင့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ် biance များအတွက်အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်အဆိုပါကုမ္ပဏီကျိန်းသေကြီးမားအလုပ်-ဘဝလက်ကျန်ငွေရှိပြီး။ နှင့်သင်တန်း၏, ဤအခိုငျအမာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုကြီးမားငွေပမာဏရှိခြင်း။ ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်, သင်ကောင်းကောင်း Bitcoin နှင့် Monero သို့မဟုတ် Etherum crypto ဈေးကွက်ကိုသိလျှင်။ သင် ... သင့်တယ် ကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ရရန်ကြိုးစား.
အလင်းရောင် Labs က
ဤတွင် Apply: https://lightning.engineering/careers.html
အလင်းရောင် Labs ကကုမ္ပဏီ cryptography ကိုအဖြစ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးနှင့်လုံခြုံရေးနှင့် privacy နှင့်အတူ cryptocurrency အကြောင်းကိုအသည်းအသန်နေသောအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနည်းပညာအသုံးချ cryptography ကိုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိစနစ်များ software ကိုအင်ဂျင်နီယာများအဘို့အဂျော့ဘ်။
ဒါကကုမ္ပဏီ cypherpunks နှင့်အတူတိုက်ပွဲနှင့် blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့အနေနဲ့ကျင့်ဝတ်နည်းပညာပိုင်းအတိမ်အနက်နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုရောက်စေဖို့ကြိုးစားနေသည်။ သင် blockchain စျေးကွက်အတွင်းလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ၏ကြင်နာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်ဒါ, သူတို့ရဲ့ website တွင်ကြည့်ရှိသည်နှင့်ကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး သူတို့ရဲ့ website တွင်ရရှိနိုင်ရာထူးသက်ဆိုင်ပါသည်။
ဤတွင် Apply: https://international.bittrex.com/
Bittrex သူတို့ 10 အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုကျော်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းယခုအချိန်တွင်ငှားရမ်းသည်။ အလုပ်အကိုင်ပူဇော်ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်အထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့လေ့လာဆန်းစစ်ရာမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမရေိ၏ United States မှာယခုအချိန်တွင်ငှားရမ်းသည်။ ဒါကြောင့်သင် blockchain နှင့်ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်လျှင်အဲဒီမှာရဖို့အတော်လေးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင် Apply: www.komodoplatform.com
Komodo ကုမ္ပဏီယခုလည်းလက်ရှိတွင်အများအပြားရာထူးများအတွက်ငှားရမ်းလူတွေကိုငှားရမ်း။ သူတို့ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းဖြစ်စဉ်တွင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်သူတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကကိုက်ညီသောပွင့်လင်းအနေအထားကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင်။ သင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ် သင်ကသူတို့အဖွဲ့ကိုပူဇော်ဖို့အဖိုးတန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ထင်လျှင်။
ဤတွင် Apply: https://www.simplex.com/join-us/
တစ်ဦးလိမ်လည်မှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေသူကုမ္ပဏီအ။ အဆိုပါ simplex ကုမ္ပဏီ cryptocurrency ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်လမ်းအဖြစ်အလွန်အမင်းလူသိများသည်။ ဒီကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစမတ်ထက်ပို။ ထိုသူတို့အဘို့ကိုပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဘက်ပေါင်းစုံသုံးခုစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများ e-commerce, blockchain နည်းပညာလိမ်လည်မှု & လုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ဟာ Bitcoin နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန် (နှင့်ဘေးကင်းဘို့) အတွက်ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့လောကီသားတို့သည်အပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင်း Etherum ရူပါရုံကိုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်, ၎င်းတို့၏ website တွင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီကနေပြန်ကန်ရပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဤတွင် Apply: https://kufun-limited.breezy.hr/
ku အကြွေစေ့ရုံရိုးရှင်းသော Bitcoin နှင့်အနည်းငယ်သည်အခြား cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအရောင်းအများ၏ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်အပေါင်းတို့နှင့်ချုပ်ရိုးရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူတို့ရဲ့န်ထမ်းများအတွက်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်.
ku အကြွေစေ့သငျသညျအဝေးမှအလုပ်လုပျနိုငျတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်, ဗီဇာမပါဘဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားကျိန်းသေကောင်းသော။ သူတို့ရဲ့ website ပေါ်မှာကြည့်ရှိသည်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဤတွင် Apply: https://www.bitwala.com/careers/
သူတို့ကလူတွေကိုအများကြီးငှားရမ်းကြသည်နှင့်သူတို့ဂျာမဏီကနေဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏အိပ်မက်လက်တွေ့ဘဝမှလာစေနိုင်သည် Bitwala အတူ။ သငျသညျ re-တီထွင်အထူးကုသူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်အသင်းနှင့်အတူဘဏ်လုပ်ငန်းမှာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကကမ်းလှမ်းအံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများအမြင့်မားဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများကသူတို့ကိုဦးဆောင်နေသည်။ ဥပမာတစျခုနှငျ့တလျှောက်တွင်ကိုယ်ပိုင်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိဘဏ်အကောင့်နှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင် Apply: https://bitoasis.net/en/front/career/
cryptocurrency ကမ္ဘာ၏အသစ်တခု type ကို join ဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ bit အိုအေစစ်ကုမ္ပဏီ။ သငျသညျ Bitcoin သို့မဟုတ်အခြားငွေကြေးစိတ်ဝင်စားလျှင်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျထွန်းသစ်စ blockchain စျေးကွက်အတွက်အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်လျှင်။ Bitoasis ကယူအေအီးအတွင်းလုပ်ကိုင်ဖို့လည်းကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
bit အိုအေစစ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်စုဆောင်းနေပါတယ်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အများအပြား Bitcoin စီမံကိန်းများကိုဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကားရှေ့ဆက်မသွားခင်, သင်ထားတဲ့အံ့သြဖွယ် GitHub ပရိုဖိုင်းရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ နှင့်သင်တန်း၏, linkedin Cryptocurrency မှထောက်ပြခဲ့သည်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည် တည်နေရာငှားရမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သူတို့အဘို့အအရေးမထားဘူး။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်သင့်ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံကဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင် Apply: www.loyal.com/careers
Loyyal ပလက်ဖောင်းအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာဒူဘိုင်းအခြေစိုက်စတင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခါကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလျှင်မြန်စွာယင်း၏ blockchain-based ကြီးထွားလာ၏အလယ်တွင်လမ်းအတွက်င်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းနည်းပညာ.
အဆိုပါ loyyal ကုမ္ပဏီ blockchain နည်းပညာသစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များကိုလောကီသားတို့သည်အ tokenizing အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ပြီးသား clients များအဖြစ် (ထိုကဲ့သို့သော IBM နဲ့ Deloitte ကဲ့သို့) ထိပ်တန်း Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများနှင့် Co-operated ပါပြီ။
ဤတွင် Apply: https://cobinhood.com/careers/
သူတို့အထူးကုတစ်ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီအိုင်တီမန်နေဂျာအဖြစ်ကျွမ်းကျင် programmer တွေရှာဖွေနေသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အဖွင့်လှစ် တကယ်အိမ်ထဲအသစ်ကနေရာလွတ်ဖြည့်သို့ကြည့်မျှော်။
ဤတွင် Apply: https://0xcert.org/jobs
ဥရောပကနေလတ်ဆတ်တဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ core ကိုအသင်းလိုဗေးနီးယားအခြေစိုက်သည်။ ဒါကြောင့်အများစုကိစ္စများတွင်, သင်ကဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိရမည်။ ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်စူပါကျွမ်းကျင်များနှင့်စူပါစမတ်ကလူကိုနားလညျပါဘူး သငျသညျပါကစ္စတန်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယကနေဖြစ်ကြပါလျှင်ဥပမာပြည်ပမှာနေထိုင်နေ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးအလုပ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒါကြောင့်ဝေးလံခေါင်သီအလုပ်သင်တို့အဘို့ဖြစ်နိုင်သမျှထက် သာ. နေကြသည်။
ဤတွင် Apply: www.leewayhertz.com/careers/
ကျနော်တို့ Irvine, ချီကာဂိုနှင့်နယူးဒေလီမှာရှိတဲ့ဂြိုလ်တုရုံးများနှင့်အတူတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောမိုဘိုင်း application များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် San Francisco မှာရုံးချုပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဆုရဒီဇိုင်နာများ၏ဖွဲ့စည်းများနှင့်ဖန်တီးသောသူအံ့သြလောက်အောင်ကျွမ်းကျင် developer များဖြစ်ပါတယ် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရည်အသွေး apps များ။ ကျနော်တို့ကအမြဲလှပအလိုလိုသိအသုံးပြုသူ interfaces ကယ်တင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။ ကျွန်တော်တို့သည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတီထွင်ခြင်း, 400 မိုဘိုင်း app များကိုအပ်နှင့်လုသောငါတို့ဇာတ်လမ်းပဲအစအဦးရဲ့ပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်တွေအများကြီးပိုကြီးဖြစ်ကြသည်။
ဤတွင် Apply: www.nemjobs.com
ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain နည်းပညာရိုးရာဒေတာဘေ့စနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရောင်းအများ၏လုံခြုံတဲ့လယ်ဂျာထိန်းသိမ်းတဲ့အခြေခံကျကျ်နည်းလမ်းပေးထားပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်များအများကြီးလျော့နည်းအရည်အချင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ပူဇော်ခဲ့သည်။ သငျသညျအခြေခံအလုပ်အကိုင်များကိုဆက်ကပ်ရှိနိုင်ပါသည်, ကောင်းစွာကြောင့်ဘာမျှမထက် သာ. ကောင်း၏။
IBC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Blockchain Consulting
ဤတွင် Apply: www.ibcgroup.io
တစ်ဦးဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့နောက်ထပ်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ ဒီအဖှဲ့အစညျးနှငျ့, သင်ကျိန်းသေ cryptocurrencies ဈေးကွက်ထဲမှာလျှောက်လွှာ၏အောင်မြင်မှုကိုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ သို့သော်တစ်အနုတ်လက္ခဏာဘက်သငျသညျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုများ blockchain နှင့်ဆက်စပ်သော cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များနှင့်အလုပ်တာဝန်များ၏ကြီးမားသောဝယ်လိုအားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ရှိသည်လိမ့်မည်, ရှိနေပါသည်။ IBC လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှမဆိုစိတ်ဝင်စားအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဘို့အလုပ်အခွင့်အလမ်းများရှိ။ နှင့်သင်တန်း၏, ထို cryptocurrency လယ်ပြင်နှင့်ကြီးထွားလာစျေးကွက်အတွင်းများစွာသောအသစ်များကိုန်ထမ်းဒီပလက်ဖောင်းဘို့အဝေးကနေပြုမိပါလိမ့်မည်။ ကြိုးစားပါမှ လျှောက်ထားနှငျ့သငျလည်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကိုရကြလိမ့်မည် သင့်အီးမေးလ်စာပုံးသို့။
ဤတွင် Apply: https://wachsman.com/careers/
အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတန်ဖိုးရှိနောက်ထပ် crypto ကုမ္ပဏီတစ်ခုက။ Wachsman မှာ, သငျသညျအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က blockchain နှင့် cryptocurrency ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီအမေရိက, ဥရောပနှင့်အာရှ, စင်္ကာပူအတွက်ကြီးမားတဲ့စကေးအပေါ်ငှားရမ်းသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ extensionally ကြီးထွားလာသည်နှင့် 30 အလုပ်အကိုင်များကျော်ကမ်းလှမ်းမှုမကြာသေးမီကထားရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကတက်ကြွစွာ blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအသိပညာနှင့်အတူသြဇာအဖွဲ့ဟာရှာကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ထက်မြက်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလျှင် အန္တရာယ်-ယူပြီးအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာဖွေနေ။ သင်သည်သင်၏ CV ကိုသုံးပါနှင့် Wachman ကုမ္ပဏီအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်လာနှင့်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီ join သငျ့သညျ။
ဤတွင် Apply: https://digitalchamber.org/careers/
သူတို့ crypto အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သည်ကြီးများအလွန်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းများ၏နှင့်ဦးဆောင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက် blockchain ထောက်ခံအားပေးမှုကုမ္ပဏီ၏ပို !. သငျသညျကိုအမေရိကန်အခြေစိုက်လျှင်အလုပ်မလုပ်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီတခု
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကောလိပ်နှင့်ဘွဲ့လွန်အဆင့်ကျောင်းသားများအတွက်အဖွင့်ထားပါတယ် အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစွန့်စားမှုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် သူတို့ရဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီရုံး၌တည်၏။ ကျနော်တို့ Internship အစီအစဉ်များရှိခြင်းကြောင့်တွေ့ပြီတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီ။
ဤတွင် Apply: https://bitflyer.com/en-jp/recruit/
BitFlyer စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်နံပါတ်များနှင့်အတူတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတူတူလူများနှင့်အတွေ့အကြုံဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကိုအထူးတစ်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံနှင့်လူမျိုးစုများအနေဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတိုကျိုမြို့ရှိငှားရမ်းခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကသူတို့ပိုပြီးလူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်မှာသူတို့ရဲ့ရုံးသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။
BitFlyer ကုမ္ပဏီရှိခြင်း အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များအများကြီးနီးပါးမည်သည့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့ကမ်းလှမ်း။ ကော်ပိုရိတ်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်အရောင်းဌာနများတွင်စံလုပ်သားများမှတက်။
ဤတွင် Apply: www.boscoin.io
အဆိုပါ blockchain အနာဂတ်ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bos အကြွေစေ့ပိုကောင်းတဲ့စနစ်တပြင်လုံးကိုစျေးကွက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အနာဂတ်၏အဓိက BOScoin ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ blockchain နည်းပညာအပေါ်သုံးစွဲသူများကကူညီပေးနေသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုရှာကြံနှင့်သူတို့အဘို့ရှာကြသည် အတူတူဒီအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုအတွက်မျှဝေဖို့,။ ဒါကြောင့် boscoin က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာကြည့်ရှိသည်နှင့်သူတို့ထံမှကမ်းလှမ်းမယ့်အလုပ်အကိုင်အရ။
Huobi Group မှ
ဤတွင် Apply: https://www.huobigroup.com/en-us/jobs/
ကလူအများကြီးငှားရမ်း Huobi အုပ်စုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစင်္ကာပူသို့မဟုတ်လန်ဒန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများကယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျိန်းသေ, ဒီကုမ္ပဏီ cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များများအတွက်သွားလာရင်းရှိသည်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ Huobi join ကမ်ဘာပျေါတှငျမညျသညျ့အရပျမှ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက် exploit နှင့်ကမ္ဘာမှတန်ဖိုးကိုမကယ်မလွှတ်။ ဒီအခိုငျအမာကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ရှာဖွေနေကြသူပြည်တော်ပြန်အားလုံးကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖွကွေား။
ဤတွင် Apply: https://www.atomintl.com/careers
ဟောင်ကောင်ရှိတစ်ဦးကကုမ္ပဏီသစ်။ သို့သော်အလွန်ကောင်းစွာအင်တာနက်အပေါ်တိုးချဲ့။ ဒါကကုမ္ပဏီပြီးသားကျွမ်းကျင်သူများလုပ်သားအင်အားအတွက်အလားအလာအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ အက်တမ် Group မှပြည်တော်ပြန်များအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ခွက်တဆယ်ရေကူးကန်သူတို့ကိုအများကြီးပိုမြန်ပစ်မှတ်ကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုသိတယ်။ ထိုအခါချမ်းသာကြွယ်ဝ အာရှကနေယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရောနှော နှင့်ဥရောပကုမ္ပဏီ overextension နှင့်အနာဂတ်တီထွင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ Atom Group နဲ့တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအာရှ cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမြင့်မားတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အကောင်းတစ်ဦးက start ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤတွင် Apply: https://www.okex.com/pages/company/recruit.html
ဒါကကုမ္ပဏီယခုအချိန်တွင်နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောလူများနှင့်စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှာဖွေနေ။ သို့သော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီနေဆဲရှိသေး၏။ ရေတွင်း-paid အလုပ်အကိုင်များတစ်ခုမှာအကြီးတန်း C ++ ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအကြီးတန်းကုန်ပစ္စည်း Manager ကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်ဒါပေးပို့ခြင်း one click CV ကို အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများများအတွက်အများကြီးပိုမြန်ခြင်းနှင့်ကောင်းသော option ကို.
ဤတွင် Apply: https://makerdao.com/careers/
ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုကုမ္ပဏီ blockchain စျေးကွက်၏အလားအလာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ ဒီအဖှဲ့အစညျး၏ဒါရိုက်တာပျဉ်ပြားကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နီးပါးမည်သည့်အရပ်မှကျွမ်းကျင်နှင့်အတွေ့အကြုံကလူရှာကြသည်။ အတူတူအလုပ်လုပ်နေတရုတ်, ဒိန်းမတ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံမှပြည်သူ့။
သငျသညျ join ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အသင်း သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုသင်အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုတည်ဆောက်ကူညီပေးပါမည်။ အကြောင်းမူကား, လူကြီးမင်း၏ CV ကို Upload လုပ်ပါ နှင့်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်၎င်းတို့၏ခြွင်းချက်ကုမ္ပဏီရှာဖွေနေစတင်ပါ။ အဲဒီမှာရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာစင်ကြယ်သောစံချိန်ရှိသည်နှင့်အောင်မြင်မှုများတိုးတက်ရေးပါတီကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် Apply: https://www.globalcap.com/jobs/
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစခန်းအပြည့်အဝစည်းမျဉ်းကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Token ရှယ်ယာထုတ်ပေးဖို့စီမံထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လန်ဒန်စီးတီးနှင့်သေချာဘို့အခြေပြုဒါကကုမ္ပဏီကမ်ဘာပျေါမှာစိတ်ဝင်စားပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးထုပ်အသင်းနှင့်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်သင်တန်း၏ကျေးဇူးတင်ပါသည်၎င်းတို့၏ထောက်ခံသူများအားလုံး။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးထုပ်ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းတစ်ဦးနှင့်လူကြိုက်များကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ ဒီကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများစီမံခန့်ခွဲ တစ်ဧရာမှတ်တိုင်ရဖို့ ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၌တည်၏။ ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူ, သင်တကမ္ဘာလုံးပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင် Apply: https://appliedblockchain.com/join
လန်ဒန်မြို့ရှိအသုံးချ Blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်း join ။ လန်ဒန် City နှင့်ပေါ်တိုအတွက်လူများအများအပြားရာပေါင်းများစွာငှားရမ်းဒါကအဖွဲ့အစည်းက။ ကျိန်းသေသူတို့အင်တာဗျူးရဖို့ထိုက်တန်သည်အခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်, သငျသညျအကောင်းကိုနိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေလျှင် အဆိုပါ blockchain ကုမ္ပဏီအတွက်သင်ကောင်းစွာကောင်းစွာနိုင်တဲ့ coding နှင့် JS မေးမြန်းမှုအတွက် orientated နေကြသည်အထူးသဖြင့်ပါလျှင်သူတို့ကို CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။ သူတို့ကစဉ်ဆက်မပြတ်ကောင်းသောအိုင်တီလိမ္မာနှင့်အတူမြင့်မားလှုံ့ဆော်မှုတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ရှာကြ၏။ ထို့အပြင်, လန်ဒန်ဆန်းသစ် blockchain နည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ဆောင်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်နေသောရည်မှန်းချက်ကြီးလူတွေကိုအခြေခံပါတယ်။
ရဲရင့်သော web Browser ကို
ဤတွင် Apply: https://brave.com/jobs/
ရဲရင့်သူကသင့်ရဲ့ဒေတာကိုချွေတာမဟုတ်ကြောင်းအင်တာနက် browser ကိုကုမ္ပဏီနှင့်မဆိုသာသည်အခြား browsers တွေထက်အများကြီးပိုမြန်ပါတယ်။ သူတို့ကမည်သည့် ICO သို့မဟုတ် cryptocurrency related စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိခြင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့က cryptocurrency စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်ဆင်တူအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူလူငှားရမ်းထားပါသည်။ အဆိုပါ Brave browser ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောပါရဂူဘွဲ့အဖြစ် Intern များကိုရှိသည်ဖို့ကူညီခြင်း။
ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှိသည်နှင့် သူတို့နှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦးအနေအထားလျှောက်ထားရန်ကြိုးစား။ ရဲရင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကအင်တာနက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်အဖြစ်နည်းပညာ-oriented ကလူရှာနေစကားပြော။
ဤတွင် Apply: www.solve.care.com
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူတိုးနီးရနျးကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းဥပမာ, UI ကို / UX နှင့် website ကိုဒီဇိုင်နာဆရာ။ သူတို့ကယခုအချိန်တွင်ဥရောပတိုက်တွင်ငှားရမ်းအကောင့်များမှာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ website ကနေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းအလွန်ကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် CEO နဲ့ Sr.development မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာရန်, အလုပ်အမှုဆောင်လက်ထောက်စကားပြောသည့် crypto စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်း၌အလွန်စမတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့တူပုံရသည်။ ကောင်းပြီ, သင့် updated သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita ပေးပို့ဖို့ဒီအလုပ်ရှင်အလွန်လွယ်ကူသောလမ်းနှင့်သင်၏ကံစမ်းပါ။
ဤတွင် Apply: https://www.huobi.com/careers/
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ, အမေရိကန် Huobi ကိုလည်းနှင့်အတူထိပ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် အများကြီးအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသူတို့ကိုယ်သူတို့ HBUS Holdco Inc ကိုကိုခေါ်ပြီးတော့တစ်ဦး blockchain နှင့် cryptocurrency နည်းပညာက start-up, related စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကနည်းပညာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအမှုဆောင်အရာရှိစျေးကွက်အကြားအပြည့်အဝလည်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီး လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ကနေပိုပြီးပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ.
အမေရိကရှိအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်, သူတို့ကအပြည့်အဝဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအကောင်းဆုံးဒေသ Silicon Valley မှာဂုဏ်ယူဆက်သွယ်မှုရှိခြင်း။ ထို့အပြင် crypto စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးမှုစိတ်ထဲတွင်ယူပြီး, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်မဆုတ်မနစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောစဉ်းစားတွေးခေါ် US မှာမြင့်မားသောအနေအထား၌ဤကုမ္ပဏီကိုလုပ်
သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူကံအနည်းငယ်ကြိုးစားနိုင်သည်အခြား Cryptocurrency က်ဘ်ဆိုက်များ
ဤတွင် Apply: https://zilliqa.com/careers.html
Zilliqa မှာအလုပ်လုပ်ဒါက cryptocurrency ကုမ္ပဏီက blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်ထိုသူတို့ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်း Zillinqa အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျကိုနောက်မျိုးဆက် blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါကမ္ဘာအဝှမ်းမှ blockchain ပလက်ဖောင်းအတွင်းက high-throughput ။ ဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီ အသစ်ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းပါဝါမှရကျိုးနပ်သည် အဆိုပါကျတ် applications များနှင့်စီမံကိန်းများ cryptocurrency အမျိုးအစားအတွင်း။
ဤသည် cryptocurrency သို့သော်သူတို့တစ်တွေသီးခြားရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ကုမ္ပဏီ Bitcoin ပိုင် သငျသညျနည်းနည်းလေ့လာသင်ယူနိုင်မည့်က်ဘ်ဆိုက် သင်အမှန်တကယ် cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားမီ။ ငွေသားအားလုံးအပေါ်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့တန်ဖိုးကိုရှိခြင်း Bitcoin အကြွေစေ့စျေးကွက်ဦးထုပ် အသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအများကြီးရှိပါတယ်ထံမှအချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်းရတဲ့နေကြသည်။
ဤတွင် Apply: https://www.stellar.org/
လူတို့သည်မိမိတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲကူညီပေးနေဒါက crypto-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစနစ်။ သူတို့ကရှာဖွေနေပါတယ် လှုံ့ဆော်မှုကျွမ်းကျင်သူများသူတို့ရဲ့ကြီးထွားလာအဖွဲ့က join ဖို့အတှကျ။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ website ပေါ်မှာကြည့်ရှိသည်နှင့်ငွေပေးချေ၏ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲကူညီ!
ဤတွင် Apply: https://eos.io/
EOS cryptocurrency ကသူတို့ခြွင်းချက်အခွက်တဆယ်ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူသည်။ အများအပြားကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒီအဖှဲ့အစညျးမှာယူနိုင်ပါသည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ coder တွေနေရာလွတ်, ဒီဇိုင်နာများ, SEO ဆိုသည်မှာမန်နေဂျာန်ထမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့ကို web developer များနှင့်ပင်အကြီးတန်း developer များအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အသင်းများအားလုံးကြောင့်, တိုင်းလယ်ပြင်၌ excel.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်း EOS ။
ဒါကကုမ္ပဏီအဖွဲ့များဥပမာကမ္ဘာကြီး, အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်, အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါန်းကျင်အများအပြားနေရာများတွင်အခြေပြုနေကြသည်။ ပြည်သူ့တကယ်ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း blockchain နှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်နိုင်ငံများတွင်မဆိုကနေလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထင်ဟပ်သူတို့နှငျ့အတူအလုပျရှာတွေ့ အမှန်တကယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်.
ဤတွင် Apply: https://www.iota.org
Iota လူတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအခြား cryptocurrency ဖြစ်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အပေါ်အခြေခံပြီးဒါပေမယ့်လည်းအကြွေစေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ positioned စူပါလူကြိုက်များလျက်နှင့်မမ။ အခုအချိန်မှာ သူတို့ငှားရမ်းကြသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်အကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီကုမ္ပဏီ crypto ဈေးကွက်ထဲမှာ extensionally ကြီးထွားလာကြောင်းကြောင့်နက်ရှိုင်းကြည့်ရဖို့ထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
IOTA သူတို့အကြွေစေ့စျေးကွက်ဦးထုပ်ပေါ်တွင် 14th အနေအထားရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းယခုအချိန်တွင်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။ IOTA ကုမ္ပဏီစမတ်ကန်ထရိုက်သုံးပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအလိုအလျောက်။ သူတို့ကတစ်ဦး "စမတ် Blockchain စီးပွားရေး" ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ထားတစ်ဦးဖြန့်ဝေကွန်ယက်ကို အသုံးပြု. ရသည်။
ဤတွင် Apply: https://www.circle.com/en/usdc
အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြွေစေ့ကဒစ်ဂျစ်တယ်အကြွေစေ့နှင့်အတူအခြားအကြွေစေ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာအကြွေစေ့တစ်ဦးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကျောထောက်နောက်ခံတည်ငြိမ်အကြွေစေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသော cryptocurrency စီမံကိန်းကို အလုပ်တစ်ခုရဖို့။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့ကလူငှားကြသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့နှငျ့အတူအတိုဆွေးနွေးချက်အရကျိုးနပ်သည်။ အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာအကြွေစေ့တစ် crypto သာဖလှယ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ USDC ဒေါ်လာနှင့်ကုန်သွယ်ကြားရှိတံတားဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ကျိန်းသေ cryptocurrency နှင့် blockchain နည်းပညာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်။
ထိုဖလှယ်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်ပြီးသား Fiat ကိုလက်မခံကြောင်းဒေသခံ Us အခြေစိုက်နည်းပညာအဘို့, သူတို့ crypto စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအလုပျလုပျဖို့ကူညီနေတာပါ။
ဤတွင် Apply: https://z.cash
Z ကိုငွေကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ blockchain နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းကိုရှိသည်ဖို့ထိုက်တန်ရုံအခြားကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေကုမ္ပဏီတခုနှင့်ကောင်းသောကုန်သွယ်ရန်အပြည့်အဝလျှို့ဝှက်ကုမ္ပဏီ။ သငျသညျကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီနှင့်အဆက်အသွယ်စီမံခန့်ခွဲရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ Zcash ခဲ့သည် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နှင့် 2016 အတွက်ထိပ်တန်းစာဝှက်ရေးသားသူအားဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးကိုဒီလိုမျိုးအတွက်ကျိန်းသေကြည့်၏ကျိုးနပ်သည်။
MIT က, Technion ထံမှသိပ္ပံပညာရှင်များ၏သုတေသနအပေါ်အခြေခံကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကိုနောက်ခံ protocol ကို။ အဖြစ်ကောင်းစွာဂျွန်ဟော့ကင်း, တဲလ်အဗစ်တက္ကသိုလ်နှင့် UC Berkeley အဖြစ်။ သောကွောငျ့ဖွစျသညျ လူတွေအလုပ်တစ်ခုအခြို့သောချဉ်းကပ်မှုပေးခြင်း.
ဤတွင် Apply: https://www.dash.org
dash ကုမ္ပဏီအခြားဒစ်ဂျစ်တယ် cryptocurrency ဖြစ်ပါတယ်။ ကျိန်းသေ, သင်အွန်လိုင်းပုဂ္ဂလိကငွေပေးချေစေဤ crypto ဒင်္ဂါးပြားကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ Dash ကုမ္ပဏီ cryptocurrency လဲလှယ်ပလက်ဖောင်းသို့သွား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ထိုက်သည်နှင့်ကျိန်းသေသူတို့ကကောင်းသောတဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့် အပြုသဘောကြီးထွား cryptocurrency စျေးကွက်အပေါ်၌တည်၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်အလွန်ကောင်းစွာလာမည့်မျိုးဆက် P2P network ထဲသို့သွားခြင်းဖြစ်သည်။
Neo ကို Cryptocurrency
ဤတွင် Apply: https://neo.org
Neo ကိုစမတ်ကအခြားကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် cryptocurrency ။ Neo ကို crypto နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများအတွက်အလွန်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကဒီကုမ္ပဏီကိုရောက်ရှိဖို့သင်တို့ကိုလည်းကူညီပေးနေသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးစမတ်စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့သူအံ့သြဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ကောငျးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ Neo ကုမ္ပဏီ non-အမြတ်အသိုင်းအဝိုင်း-မောင်းနှင် blockchain စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့်အတူအမှတ်တစ်ခုမှာသူတို့အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် blockchain နည်းပညာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝိသေသလက္ခဏာ အဆိုပါ cryptocurrency ဈေးကွက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖျက်ပစ်ဖို့။
ဤတွင် Apply: https://tezos.com/
Tezos စမတ်စာချုပ်များနှင့်ကျတ် applications များများအတွက် blockchain စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောပလက်ဖောင်း အနီးဆုံးအနာဂတ်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ကြည့်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ငှားရမ်းခြင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေ, Tezos သူ့ဟာသူအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်မယ့် blockchain ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်သေချာပြီးသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှပြင်ဆင်ချက်အပေါ်မဲပေးစီမံခန့်ခွဲပြီ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ စမတ်နည်းပညာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ။
ဤတွင် Apply: https://dogecoin.com/
Dogecoin တစ်ဒဏ္ဍာရီကိုဗဟိုဦး, peer-to-peer ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီငွေကြေးကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိဟာသအဖြစ်စတင်သည်။ ဒါပေမယ့်ပိုင်ရှင်တွေအလျင်အမြန်ထွက်တွက်ဆ ဒီစတင်ရန်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်မည်အကြောင်း.
Dogecoin ကောင်းတစ်က်ဘ်ဆိုက်သည်နှင့်အကြွေစေ့စျေးကွက်ဦးထုပ်ပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့အနေအထားရှိခြင်း။ ဒါကကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုသင်အလွယ်တကူအွန်လိုင်းပိုက်ဆံပို့ပေးရန်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်ကစဉ်းစားပါ "ဟုအဆိုပါအင်တာနက်ငွေကြေးကို။ " ထိုအ သငျသညျအချက်အလက်များ၏ကောင်းတစ်ဦးတန်ဖိုးရှိသောအရင်းအမြစ်ထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ဒီဘလောက်ကွင်းဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်း။
ဤတွင် Apply: https://wavesplatform.com/
လှိုင်းတံပိုးကိုသူတို့ cryptocurrency ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အတော်လေးကောင်းတစ်ဦးစျေးနှုန်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေကြအကြွေစေ့နှင့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ကြသည်။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီသေချာအတွက်ရလဒ်ကိုအတုမပေးပါ။ အဆိုပါလှိုင်းအကြွေစေ့သစ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစျေးကွက်အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သွားပေါ်တတ်၏။
လှိုင်းတံပိုးဒင်္ဂါးပြားအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာ crypto ကမ္ဘာပလက်ဖောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီအကြွေစေ့ဖန်တီးဒါပေမယ့်လည်းမသာ ဖန်တီးရန်အလွန်ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲခြင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ငွေကြေးကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက် wallets ။
ဤတွင် Apply: https://www.trusttoken.com/careers.html
TrustToken ရဲ့အမှန်တကယ်ကောင်းသောရူပါရုံကိုအတူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူတို့ကတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ သူတို့ဟာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချကုန်သွယ်ရေးမှတဆင့်မြို့တော်သော့ဖွင့်ခြင်းအားဖြင့် blockchain ကမ်ဘာပျေါတှငျဘဏ္ဍာရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဒီမိုကရေစီရေးဝန်ဆောင်မှုကိုအခြေခံပြီးပါပြီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပိုင်ဆိုင်မှု။ Trust မှတိုကင်နံပါတ်မြို့တော်သစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်၏အဆင့်ဆင့်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိအာဏာကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းဖို့မျှော်လင့်။
ဤတွင် Apply: https://qtum.org/en/about/recruitment
ပေကျင်း, ရှန်ဟိုင်း, ဆီလီကွန်တောင်: ကအတော်ကြာနေရာများတွင်ငှားရမ်း Qtum ။ သငျသညျမိုဘိုင်း app များကိုအတွေ့အကြုံရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, ဒီကုမ္ပဏီကျိန်းသေသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Qtum နှင့်အတူ R & D blockchain နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဦးတည်ချက်ကစမတ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
Qtum ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအကြွေစေ့စျေးကွက်ဦးထုပ်အတွက်နေရာကောင်းရှိခြင်း။ ဤသည် Cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုရရှိရန်ကူညီပေးနိုင် Qtum ထံမှပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကြောင့်နှင့်ကျိန်းသေ, ကသူတို့ရဲ့ website သို့သွားရောက်ကြည့်ရှု ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကငှားရမ်း.
ဤတွင် Apply: https://litecoin.org/
blockchain နည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. နောက်ထပ်ကောင်းသော cryptocurrency ။ ဒါကကုမ္ပဏီသူတို့ကိုပြတင်းပေါက်အပေါ်အရာအားလုံးဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်အားဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်လွယ်ကူစေပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့တစ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပိုင်းဎဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်သင်သည်တတ်နိုင် LinkedIn အပေါ်တစ်ဦးကုမ္ပဏီအလုပ် post ကိုရှာပါ။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီကုမ္ပဏီလာမည့် 10-15 နှစ်အတွင်းပိုပြီးလူတွေငှားရမ်းမည်ကိုယုံကြည်နေကြသည်။
ဤတွင် Apply: https://www.cardano.ogr/
Cardano crypto ငွေကြေးများထဲမှကုမ္ပဏီတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သူတို့3အဖွဲ့အစည်းများရှိခြင်းနေကြသည်။ သူတို့အားလုံး တူညီသောရည်မှန်းချက်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေ, Cardano အမည်ရှိ blockchain နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှပံ့ပိုး။
ဤတွင် Apply: https://ww.getmonero.org/
Monero Cryptocurrency သင်တစ်ဦးကြည့်သင့်ပါတယ်ရှိရာအခြားက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့သည်လည်းရှိခြင်းမရှိပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပိုင်း။ ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးထွားလာသည်နှင့်ကျိန်းသေအနီးဆုံးအနာဂတ်ကာလ၌အချို့သောနေရာလွတ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင် Apply: https://holochain.org/team.html
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျရှေ့ဆုံး CSS ကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းလျှင်။ နဲ့ HTML ကောင်းသောဖှံ့ဖွိုးတိုးတအတွေ့အကြုံကို။ သင်လုပ်နိုင်သည် ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များသူတို့ထံမှကမ်းလှမ်းချက်များရှိသည်။ ဒါ့အပြင်စာမျက်နှာအပြင်အဆင်, Single-စာမျက်နှာ applications များ, ရင်တွင်းစကားသံ, ရင်တွင်းစကား-Native ဒီသင်ဤကုမ္ပဏီမှဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်အလုပ်နှင့်အတွေ့အကြုံအားလုံးကြင်နာ။
ဤတွင် Apply: https://ont.io/
Ontology ကုမ္ပဏီ, တရုတ်အတွက် blockchain ကုမ္ပဏီ။ ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုက၏မန်နေဂျာများကပထမဆုံး blockchain တရုတ် blockchain ကျွမ်းကျင်သူများကဖြစ်လာကြပါပြီ။ သူတို့ရဲ့အဓိကစီမံကိန်းဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးအထောက်အထားဖောင်ဒေးရှင်းမှ join ဖို့တရုတ်ထံမှလာ၏။ ကောင်းသောနှင့်အကြွေစေ့ဦးထုပ်စျေးကွက်အပေါ်ကောင်းသောတည်ငြိမ်အနေအထားရှိခြင်းပေါ်သို့။
ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုက၏မန်နေဂျာအွန်လိုင်းအထောက်အထားတွေကိုများအတွက်စံကျတ်ဂေဟစနစ်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြသည်။ ကောင်းပြီဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးနဲ့အတူစီမံခန့်ခွဲ ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်ကြိုး။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး blockchain open source ဖြစ်ပြီးအဘို့ဤအခိုငျအမာနျကွိုးစား စီမံကိန်းများအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု.
ဤတွင် Apply: https://www.vechain.org/
VeChain ကုမ္ပဏီမဆိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲခိုင်မာအောင်ကောင်းလှ၏။ VeChain ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဆင့်ကိုအများပြည်သူ blockchain ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကစင်္ကာပူတွင်အခြေစိုက်ကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုထိုအရပ်မှဖြစ်ပါတယ်။ ကျိန်းသေ, သင်သည်သူတို့၏စာမျက်နှာကိုသွားပါနှင့်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေပေါ်ထမ်းရှာဖွေသူတစ်ဦးကအီးမေးလ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
VeChain ယင်းမှ blockchain နည်းပညာချိတ်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ထား ပြည့်စုံသောအုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်စစ်မှန်သောကမ္ဘာကြီးတစ်အားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးမော်ဒယ်အဖြစ်အဆင့်မြင့် IoT ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ applications များအတွက်ရှေ့ဆောင်တွေ။
ဤတွင် Apply: https://renproject.io/
Ren ကုမ္ပဏီ crypto စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့ဖြစ်၏နှင့်အမှောင် nodes များဖြန့်ကျတ်ကွန်ယက်ကိုစွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီကုမ္ပဏီကိုသီးသန့်တည်ရှိမှု-ထိန်းသိမ်း applications များ run ဖို့လုံခြုံပါတီစုံကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကြောင့်, သင်ကောင်းတစ်ဦးပရိုဂရမ်မာကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းလျှင် သင်သည်ထိုသူတို့၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ် နှင့်အစုစု။ သူတို့တစ်တွေကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်လာမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးနိုင်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့် Ren တစ်ခုကိုအကြောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင် Apply: https://ddex.io/
DDEX ဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းကို Hydro ပရိုတိုကောပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပထမဦးဆုံးကျတ်လဲလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူသိများကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟောပြောသည်နည်းပညာကိုတိုးမြှင့်, ချက်ချင်းကမ်းလှမ်း, Real-time အလို့ငှာလုံခြုံ On-ကွင်းဆက်အခြေချနှင့်အတူအရာတိုက်စစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ website တွင်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးထွားလာနေသည် သူတို့ website တွင်အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်အကိုင်များရှိစေခြင်းငှါ.
ဤတွင် Apply: https://www.bitinka.com/uk/bitinka/home
BItinka အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောက်သည်များအတွက် cryptocurrency အကျိုးဆောင်များနှင့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်သူတို့တစ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း link ကိုရှိခြင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီကုမ္ပဏီကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကြီးထွားလာအဖှဲ့အစညျး။ ဒါကြောင့်သေချာဘို့ကသူတို့ရဲ့ website တွင်ကြည့်ရှိသည်ဖို့ထိုက်တန်ကြလိမ့်မည်။
ဤတွင် Apply: https://www.decred.org/
Decred အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသည်။ အဆိုပါအကြွေစေ့ 2016 အတွက်ကိုယ်ပိုင်စစ်ဆင်ရေးစတင်သည်။ အဆိုပါ Decred အကြွေစေ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ blockchain အုပ်ချုပ်မှုဖြေရှင်းဖို့စီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကကုမ္ပဏီဆန်းသစ်တီထွင်မှုထက်ပိုပါတယ်။ အဆိုပါကျတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့် Self-ရန်ပုံငွေ Third-party သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေအခမဲ့, ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်ပေါ်နေသောတစ်ကြံ့ခိုင်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို enabled ပါပြီ။
ဤတွင် Apply: https://www.augur.net/
ကုမ္ပဏီပိုပြီး blockchain အပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်း operated ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကဲ့သို့ဖြစ်၏။ , ဟုတ်ပါတယ်မိမိတို့ cryptocurrency နှင့် blockchain အကြွေစေ့စီမံခန့်ခွဲနေကြ Augur ။ ဖောက်သည် app ထဲမှာသူတို့ကိုသုံးနိုငျဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုသို့မိမိတို့၏ system ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိပါလိမ့်မယ်လျှင်ဤ blockchain နည်းပညာနှင့်တကွသင်ဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီဘဏ္ဍာရေး failers ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်။
ဤတွင် Apply: https://changelly.com/
ဒီအစာရှောင်ခြင်းဖလှယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကြယ်ပွင့်ကြီးထွားလာကုမ္ပဏီ၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Changelly cryptocurrency သို့စံငွေကြေးလဲလှယ်များအတွက်လဲလှယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်ကြာပါတယ်။
Changelly အစားသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်သူတို့ရဲ့ crypto လဲလှယ် platform ပေါ်တွင်၎င်းတို့၏ cryptocurrency သိုလှောင်၏, သူတို့ဘာသာပြောင်းအရောင်းအတက်ထားကြ၏။ သေချာဘို့ crypto ငွေပမာဏကုန်သွယ်မှုကယ်ဖို့အများကြီးပိုနည်းလမ်းများပေးခြင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီသူတို့တစ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်ဂျက်ရှိခြင်းကြသည်မဟုတ်ကိုအတည်ပြုရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နေဆဲအတွက် pop နှင့်တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။
နိဂုံး: Cryptocurrency အတွက်ဂျော့ဘ်နှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေး
သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက် Bitcoin အလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားမထားပါနဲ့။ cryptocurrency အမြန်ဆုံးသောကွောငျ့ ကြီးထွားလာစျေးကွက်။ အလုပ်တစ်ခုရဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစျေးကွက်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ ကျနော်တို့ယူပြီးနေကြတယ် အိန္ဒိယနှင့်ဒူဘိုင်း၌သူတို့ကိုအားမရထံမှအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ Cryptocurrency ဂျော့ဘ်များမှာ အသစ်ကပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဖွင့်လှစ် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ။
အလုပ်အကိုင်ဒီလိုမျိုးရရှိရန်အခြားသောလမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တတ်နိုင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပျဉ်ပြားမှသင်၏ CV post သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်သင်၏အသေးစိတျမှတ်ပုံတင်ရန် အလုပျသမားမြားအတှကျဒေသခံအရှေ့အလယ်ပိုင်းပေါ်တယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သွားပါလိမ့်မယ်အဘယ်သို့သောလမ်း။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကုန်သွယ်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအဖြစ်တလျှောက်လာကြ၏။ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေဂိမ်း၏ဆုရှင်ဖြစ်ကြသည်။